नेपालीहरू कतार प्रहरीमा भर्ना हुन जान पाउने, कति छ तलब ? - Nepali in Australia
June 27, 2021 autherLeaveaComment on नेपालीहरू कतार प्रहरीमा भर्ना हुन जान पाउने, कति छ तलब ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ। तर पहिले आफ्नो प्रहरीमा नेपाली नागरिक लिन इच्छुक कतारको “पछिल्लो मनस्थिति” के छ भन्ने थाहा नभएकाले त्यसबारे अन्योल कायमै रहेको नेपाली अधिकारीको भनाइ छ।
अधिकारीहरूका अनुसार यही असार पहिलो साता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रबाट कतार प्रहरीका लागि माग आएमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न कतारस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने, “कतारमा सुरक्षाकर्मीका रूपमा रोजगारी दिने भनेर कतारले भनिसकेपछि कतारस्थित राजदूतावासमा कतार सरकारले त्यो पत्राचार गर्‍यो।
राजदूतावासले केही प्रश्नहरू राखेर हामीसँग निर्देशन मागेको अवस्था थियो।” “त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट त्यो पत्रको निर्देशनात्मक जवाफ पठाएको हो।”
कतार प्रहरीमा नेपाली पठाउन निजी क्षेत्रलाई वैधानिकता, होला त सार्थकता ? यस्ता छन् तलब सुविधा (भिडियो हेर्नुहोस)